Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ndị ọrụ ugbo na-acha ọcha: Iwu ọhụrụ maka ịkpa ókè agbụrụ
Ndị ọrụ ugbo na-acha ọcha na-agba akwụkwọ maka mgbanwe ịkpa oke iji gbochie ijeri US $ 5 na enyemaka mberede maka ndị ojii, nwa amaala America na ndị ọrụ ugbo nke agba.
Onye ndu obodo John Boyd na KJ Skippa Mak Marley jikọrọ aka na Kara Brewer Boyd, Association of American Indian Farmers, ka ha wepụta abụ "Ala ahụ" iji gosipụta nkwa ndị mebiri emebi nke akụkọ ihe mere eme na nke na-aga n'ihu, nkwekọrịta mebiri emebi, ịkpa ókè agbụrụ, na mfu ala nke ụmụ amaala nwetara. Ndị America na ndị ọrụ ugbo ojii na US.
John Boyd, Jr., Onye nchoputa na Onye isi ala, National Black Farmers Association, 4th generation Black Farmer na Mecklenburg County, Virginia gbara akwụkwọ US Dept of Agriculture (USDA) akwụkwọ ma nata eziokwu nke Ịchọta maka ịkpa ókè agbụrụ nke butere na 1st USDA ịkpa ókè agbụrụ. site n'otu n'otu. Boyd gara n'ihu nyere 10,000s nke ndị ọrụ ugbo ojii na ndị pere mpe aka itinye akwụkwọ mkpesa ịkpa oke, ikpe na omume klaasị megide USDA. Ọrụ ugbo bụ ọrụ kacha ochie anyị. Na nnwere onwe anyị ji inwe ala anyị ga-arụ ọrụ maka onwe anyị, ezinụlọ anyị na ọganihu agbụrụ. “Acres iri anọ na inyinya mule,” bụ ọchịchọ agbakwunyere.
The American Rescue Plan Act (ARPA) nke mmemme 2021 na-anọchite anya enyemaka enyemaka maka ndị ọrụ ugbo ojii bụ ndị lụsoro ịkpa oke USDA ọgụ site n'ụlọ ikpe iji nweta mbinye ego na mbụ.